Maamulka Manchester United iyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo ku kala qaybsan xalka heshiis kordhinta Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 16 maajo 2021. Maamulka ugu sarreeya kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaya inay heshiiska u kordhiyaan laacibkooda khadka dhexe ka ciyaara ee Paul Pogba, hase ahaatee, waxaa jirta caqabad weyn oo aysan awoodin inay ka gudubto.
Waxaa lagu soo warramayaa inay Man United wada xaajood la bilawday wakiilka Pogba ee Mino Raiola, hase ahaatee, waxaa Raiola ayaa shuruud adag hor dhigay kooxda reer England isagoo ka dalbaday in mushaharka laacibka Faransiiska ah la gaarsiiyo 400,000 oo gini toddobaadkii.
Dhanka kale, macallinka Red Devils ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku cadaadinaya maamulka kooxdiisa inay aqbalaan mushaharka uu wakiilka Pogba dalbanayo, waana arrinta ay ku kala qaybsan yihiin macallinka iyo madaxda Man United.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid iyo Barcelona oo xaalado dhaqaale la tacaalaya ayaa xiddigaan hore isugu dayay inay lasoo saxiixdaan, hase ahaatee, haatan kooxda kaliya ee loo arko inay heli karto saxiixiisa waa Paris Siant-Germain oo il gaar ah ku heysa heshiis kordhinta Pogba.
Qandaraaska uu 28-jirkan kula jiro Manchester United ayaa dhici doona xagaaga dambe, waxaana kooxda reer England ay ku qabsanaan doontaa inay iska iibiso laacibkii hore ee Juventus haddii ay ku guuldarreystaan inay xagaagan u kordhiso heshiiska.